Wararkii ugu danbeeyay ee xaalada Mohamed Salah kadib dhaawicii soo gaaray xalay – Gool FM
Wararkii ugu danbeeyay ee xaalada Mohamed Salah kadib dhaawicii soo gaaray xalay
Liibaan Fantastic May 27, 2018
(Liverpool) 27 Maajo 2018 Mohamed Salah ayaa xalay isaga oo oynaya laga saaray kulankii Final-ka Champions League kadib dhaawac halis ah oo ka soo gaaray garabka.
Saacad kadib bixitaankiisii, BBC Sport ayaa baahisay in baaritaan hordhac ah oo lagu sameeyay laacibka lagu ogaaday inuu seegayo koobka adduunka kadib jab ka soo gaaray lafta garabka.
Waxaa taas sii xigtay waraysi uu bixiyay tababare Jurgen Kopp oo yiri: “Dhaawaca Mohamed Salah wuxuu u muuqdaa mid halis ah”.
Laakiin warka BBC waxaa beeniyay dhaqtarka xulka qarank Masar kaas oo sheegay inuu xiriir la sameeyay dhaqaatiirta Liverpool waxayna u sheegeen inuu garabku kala baxay oo kaliya, waxaana lagu ogaaday raajadii la saaray.
Dhaqtarka ayaana rajo ka muujiyay in Mohamed Salah uu taam u noqon karo kulanka ugu horeeya ee xulkiisu uu la ciyaarayo Uruguay wareega guruubyada ee koobka adduunka.
Wasiirka sportiga iyo dhalinyarada ee dalka Masar ayaa dhankiisa sheegay in Salah uu u baahan yahay nasiino 2-isbuuc ah, wuxuuna xaqiijiyay inuu taam u yahay koobka adduunka oo uu ku jiro liiska kama danbaysta ee la shaacin doono 4-ta June.
Cristiano Ronaldo oo dalbaday in Magaca laga badelo Champions League...(Maxaa loo bixinayaa???)
Ramos oo fariintaan u diray Mohamed Salah kadib dhaawicii halista ahaa ee uu gaarsiiyay